Sharciga Broadband ee Gobolka Washington oo dhan - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Sharciga Xadgudbinta Gobolka ee Washington oo dhan
Xafiiska warbaahineed ee Gobolka Washington
-Dhaqaalaha Wada Shaqaynta
Sahaminta Xadka iyo Xawaaraha Gobolka
Naga caawi sidii aan u aqoonsan lahayn meelaha adeegga internetka ee xawaaraha sare leh ama aan lahayn ee ku yaal gobolka Washington
Sannadka 2019, Sharci dejinta Gobolka Washington ayaa dhaqan gelisay Bedelka Labaad Golaha Guurtida Hindise sharciyeed 5511, garashada in helitaanka ballaarinta baahinta ay muhiim u tahay dadka deggan Washington. Sharcigu wuxuu dejiyay gelitaanka iyo soo dejinta/kor u qaadida yoolalka xawaaraha ee guryaha, ganacsiyada iyo bulshooyinka.
Si loo kobciyo nolosha dhammaan dadka deggan gobolka Washington iyo ganacsiyada iyadoo la hubinayo inay heli karaan tikniyoolajiyad ballaadhan oo la awoodi karo, la isku halleyn karo oo la qiyaasi karo/mustaqbalka la hubin karo awoodda dhaqaale ee gobolka Washington iyo miyiga gobolka maanta iyo mustaqbalkaba:
Marka la gaaro 2024: 25/3 Mbps waa la cabbiri karaa;
Markay tahay 2026 - 1/1 Gbps dhammaan hay'adaha barroosinka; iyo
Markay tahay 2028: 150/150 Mbps dhammaan dadka deggan iyo meheradaha.
Codsiga soo jeedinta
Deeqda Navigator Dijital ah
Xafiiska Broadband State wuxuu hadda leeyahay fursado maalgelin oo furan.
Deeqaha u dhigma ayaa loo heli karaa fursadaha maalgelinta kaabayaasha ballaarinta ee dowladda dhexe
Deeqaha Dardargelinta Kaabayaasha Dhaqaalaha
CODSIGII HADDA WUU XIRAN YAHAY
Barnaamijka Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah
Gargaarka Ballab-fidinta Degdegta ah ee soo socota (EBB) waxay bixin doontaa qiimo-dhimis ah illaa $ 50 bishii oo loogu talagalay adeegga ballaadhinta ee loogu talagalay qoysaska u-qalma iyo illaa $ 75 bishiiba qoysaska ku nool dhulalka Qabiilka. Intaas waxaa sii dheer, qoysaska u qalma waxay sidoo kale heli karaan qiimo dhimis hal mar ah oo dhan illaa $ 100 si ay uga iibsadaan laptop, kumbuyuutar desktop ah, ama kaniiniga bixiyeyaasha kaqeyb galaya haddii ay ugu deeqaan $ 10- $ 50 qiimaha iibka.
Tilmaamaha Barnaamijka EBB
Tani Tilmaamaha Barnaamijka Gargaarka Ballab Ballaaran waa kheyraad loogu talagalay bixiyeyaasha adeegyada dakhligoodu hooseeyo ee la shaqeeya shakhsiyaadka u qalmi kara barnaamijka EBB. Tilmaamahan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan faa'iidooyinka barnaamijka, sida loo dalbado iyo halka laga barto wax badan oo ku saabsan mawduucyada gaarka ah ee EBBP.
Tilmaamaha Barnaamijka EBBP (PDF)
Xuquuqda Macaamilka EBBP iyo Ogeysiiska Talooyinka
Tani ogaysiis waa in laga caawiyo kaqeybgalayaasha Barnaamijka EBB iyo kaqeybgalayaasha mustaqbalka inay ka fogaadaan waxqabadka ugaarsiga ah ee la xiriira barnaamijka iyo lacagaha aan la fileyn ee adeegga internetka marka barnaamijku dhammaado.
Ogeysiiska Macaamiisha EBBP (PDF)
Waraaqda EBBP (PDF)
Sida loo dalbado Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah (PDF)
Xaashida xaqiiqda ee Barnaamijka EBB ee Gobolka Washington ee Broadband (PDF)
Xiriirinta Barnaamijka EBB
Ka raadi bixiyeyaasha Gargaarka Degdegga ee fidiya aaggaaga (shabakad)
Liiska Bixiyeyaasha Waxtarka Xadka Degdega ah ee Washington (shabakad)
Bogga EBB ee Guddiga Isgaarsiinta Federaalka (shabakad)
Diiwaangelinta Barnaamijka Kireynta Baahiyaha Baareedka ee USAC iyo Codsiyada Tracker (shabakad)
Wadid-in WiFi Goobaha Goobta Goobta
Iyada oo laga jawaabayo saamaynta ay leedahay COVID-19, Drive-In WiFi Hotspots waxay siisaa ku-meel-gaar ah, internet-ka deg-deg ah oo bilaash ah dadka reer Washington ee aan haysan adeegga ballaadhinta guryaha. Booqo goobta raadiyaha.
Macluumaadka Kooxaha Waxqabadka Broadband
Kooxaha Waxqabadka Broadband (BAT) waa iskaashiyo ay bulshadu waddo oo tilmaamaya baahida isku xirnaanta iyo helitaanka helitaanka beelahooda. BAT waxay ka caawin kartaa bulshada inay:
Dhex -dhexaadinta wada -hadalka ballaaran iyo ka -qaybgalka tooska ah ee Xafiiska Broadband State.
Caawi dadaalka sinnaanta dhijitaalka ah ee gobolka oo dhan iyo ka -mid -noqoshada oo matala farsamooyinka bulshada iyo baahiyaha helitaanka.
Ku xidh ka qaybgalayaasha hadafyada mashruuca ee iskaashiga ah.
Keeno wacyi -gelinta hore ee mashaariicda bulshada fursadaha maalgelinta.
Guji halkan si aad u aragto hadda Liiska BAT.
Miyaadan ku arag BAT -kaaga boggan? Fadlan iimayl devin.gombosky@commerce.wa.gov si aad kooxdaada u metesho halkan! ”
Devin Gombosky, Kaaliyaha Maamulka devin.gombosky@commerce.wa.gov